Shure MV5C, kuongorora kwakadzama kwemaikorofoni yakachinjika | Gadget nhau
Shure MV5C, kuongorora kwakadzama kwemaikorofoni inoenderana
Maikorofoni uye mawebhu ekunze ekunze zvaive chinhu chekare izvo zvino vashandisi vazhinji vakasarudza iyo laputopu ine hunyanzvi hwakavakirwa mukati, pamwe nekukwira kweasina waya mahedhifoni anosanganisira mamaikorofoni anogara ari nani. Nekudaro, "telecommuting", kukwira kwekutenderera nepodcasting kwakaita kuti isu tichinje pfungwa dzedu zvishoma.
Ino nguva isu tinavo Shure MV5C maikorofoni, maikorofoni anonyanya kuita basa aine vimbiso yechiratidzo chinozivikanwa. Isu tinoongorora iyi maikorofoni zvakadzika, senguva dzose, uye tinokuudza ayo akasimba mapoinzi uyezve, isina kusimba.
3 Mupepeti ruzivo
Panguva ino Shure asarudza zvavanodaidza Home Office, maikorofoni isina kunanga zvakananga kune nyanzvi yeruzhinji asi pane "vateereri vese." Pasina kupokana, aya marefu, akazadzwa nedambudziko Zoom mafoni akatungamira vagadziri verudzi urwu rwezvishandiso kuti vagadzire mhinduro yakangwara kune mamwe matambudziko, chimwe chinhu chinofanira kutambirwa. Aya ndiwo mabudiro akaita iyi MV5C, maikorofoni nokuti Imba Hofisi uye musangano wevhidhiyo sekureva kwechiratidzo chimwe chete. Naizvozvo, kuve neakavanzika hulk pane desktop yako haisi iyo yakanyanya kunaka sarudzo. Shure anozvipira kune minimalism sezvatinoona.
Weight: 160 gramu
Tine 89 x 142 x 97 chigadzirwa ine musoro wekutenderera wakazara uye brushed aluminium base iyo pachishandiswa sikuru inotibvumidza kuti tigadzirise mafambiro emakrofoni. Kumashure kwemusoro wedenderedzwa ndipo patichawana chinongedzo chekubatanidza kuUSB uye ne3,5mm Jack kune mahedhifoni. Kune rimwe divi, munzvimbo yepamusoro inoverenga logo yechiratidzo uye chiratidzo cheLED chemamiriro emakrofoni. Ehe, isu tinofanirwa kusimbisa kuti isu tinosanganisira USB-A uye USB-C tambo mupakeji saka hatifanire kuve nematambudziko ekuenderana.
Tine mudziyo une mhinduro mukati kuwanda kwe20 Hz kusvika 20 kHz, akakwirira kupfuura mamaikorofoni echinyakare akaiswa mumabhuku ekunyorera. Nekudaro, iyi frequency mhinduro inochinjika uye ichaenderana pamwe ne kumanikidza kweruzha kwe130 dB SPL. Kune rimwe divi, isu tine condenser muturikiri uye inozivikanwa cardioid pateni, mumutsara wezvigadzirwa izvo Shure zvinowanzo gadzira. Hatina iyo hongu, chero mhando yepasi yakatemwa firita, pamwe nekushomeka kwakadzikira uye chero rudzi rweiyo inoshandurika capsule.
Iyo maikorofoni yakagadzirirwa kuti ive nemhinduro yakapfava, Ndokunge, kunyanya kugadzirisa izwi. Iyo yekumisikidza inenge isipo, ichinyatso kubatanidza izvi Shure MV5C Kuburikidza neiyo USB chiteshi kune yedu laptop ine Windows kana Mac yedu, nyowani odhiyo sosi ichaonekwa muZoom kana maTimu anodonhedza menyu, zvinobudirira iyo ichave iyo Shure maikorofoni. Iyo haina software inogona kurodha pasi (yatakaedza) saka panguva ino Shure asarudza plug-uye-kutamba, zvine musoro kufunga kuti izvi zviri pachena zvinotarisa pa Imba Hofisi.
Takamira pamberi pemakrofoni izvo sezviri pachena hazvisi kuzotipa chero chakasiyana kubva kumazana ezviuru emakrofoni ekunze chero nguva yekutengesa. Chinangwa chayo ndechekupa kubatana nekukurumidza uye kuri nyore, ndosaka Shure akatama zvishoma kubva kune nyanzvi nyika kuti asvike kune vanoshaya vateereri izvozvi neMV5C maikorofoni, yeavo vashandisi vane mafoni kuburikidza nemapuratifomu senge Microsoft Teams zuva nezuva uye zuva kunze. Zvisinei, kuti Shure atsauka kubva kune yavo yechinyakare chiitiko hazvireve zvachose kuti vazvikanganisa.
Kunyangwe iyo Shure MV5C isingatipe chero rudzi rwechiitiko chevashandisi chakasiyana nedzimwe, zvine mukana wekuti mumatanho maviri chete isu tiri kufona kana vhidhiyo kufona uko rimwe bato rinotinzwa zvakajeka, pasina kupindira kana chero mhando yeruzha, ndizvo chaizvo zvaitsvakwa naShure neizvi MV5C, ipa iyo garandi uye kudzikama kwemhedzisiro iyo yako brand inopa, uchibva kure nevateereri vanotsvaga kuomarara uye kuita kwakawanda. Ndokusaka iyo Shure MV5C isu tichigona kutaura kuti inozadzisa chaizvo, kwete zvakanyanya kana zvishoma, izvo zvainovimbisa.
Mubvunzo izvozvi ndewokuti kana kwete zviriko chaizvo kubhadhara ma105 euros ayo Shure MV5C anodhura, mudziyo uyo, kufanana nezvimwe zvese zvigadzirwa, une mutengo wakakwira zvishoma uchienzaniswa nemakwikwi. Tine mamaikorofoni anodhura hafu kana kutomboderera kuAmazon uye izvo zvichatipa mhedzisiro yakafanana, kunyangwe isu tisingazove nechivimbiso cheShure, rutsigiro rwaShure kana zvedi zvakachengetedzwa zvakanaka dhizaini uye zvekuvakisa. Zvekare, iyi Shure MV5C ndiyo mic yesarudzo ye Home Office kutsvaga zvakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Shure MV5C, kuongorora kwakadzama kwemaikorofoni inoenderana
Kobo inopa Elipsa yayo nyowani, iyo yakazara-e-kuverenga